Astrology – ဂျမ်းပုံ
April 8, 2021 April 8, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သင်တန်းတက်ရတာမျိုးတွေ နေရာပြောင်းရတာမျိုးတွေ အချိန်ပြောင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်။ အထူးအဆင်မြင့် တာဝန်များ ရတာကြောင့် တာဝန်များပိပြီး စိတ်ဖိစီးတာမျိုးတွေ စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တွေမျိုး အပေါင်းအသင်းများနဲ့ မကြာခဏ အချေအတင်ပြောရတာမျိုးတွေ အတိုက်အချုက်လေ းတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။အိုးသစ်အိမ်သစ် ပြောင်းရွေ့ရတာတွေ မသွားချင်တဲ့နေရာတွေ သွားရတာတွေ …
April 7, 2021 April 7, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
ယခုနှစ်ရဲ့ (၇)ရက်သားသမီး သင်္ကြန်စာဟောစာတမ်း နှင့် အတာစားတဲ့ သောကြာသားသမီးတွေ ယခုနှစ်ရဲ့သင်္ကြန်စာဟောစာတမ်းကြီး… မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊နှောင်းတခူးလဆန်း ၃ ရက်၊ခရစ် နှစ် 2021 ဧပြီလ ( 14 ) ရက်( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် ၅ နာရီ ၄၆ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့် အချိန် တွင် …
၂၀၂၁ ဧပြီလ (၆) ရက်အတွက် တစ်ရက်တာဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်မျာ
April 6, 2021 April 6, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
၂၀၂၁ ဧပြီလ (၆) ရက်အတွက် တစ်ရက်တာဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ ကံကောင်းစေသောအရောင် (နီညိုရောင် စံပါယ်ဖူးရောင် အစိမ်းရောင် ရောယှက်ရောင်) Lucky No.(8/2/4) ရှောင်ရမည့်အစားအစာများ (မုန့်ဖက်ထုပ် ပလာတာ သြဇာ အုန်းနို့ခေ့က်ဆွဲ ဒိန်ချဉ်) ဒုက္ခပေးနိုင်သည့်နေ့သား (တနင်္ဂနွေ ကြာသပတေး) ယတြာ အိမ်ဘုရား၌ “စမူဆာ ၃ ခု” ကပ်လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါလေ…။ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်း(၁)ရက်တာကိစ္စများအောင် မြင်၍ …
၂၀၂၁ ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့အတွက် တစ်ရက်တာဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်မျ
April 5, 2021 April 5, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
၂၀၂၁ ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့အတွက် တစ်ရက်တာဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ ကံကောင်းစေသောအရောင် (နီညိုရောင် အနီရောင် အနက်ရောင်) Lucky No.(7/0/1/5) ရှောင်ရမည့်အစားအစာများ (ကြက်ဥ ကြေးအိုး မလှိုင် ဖရဲ လျက်ဆား ဝက်စွပ်) ဒုက္ခပေးနိုင်သည့်နေ့သား (ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး) ယတြာ အိမ်ဘုရား၌ “ဆီကြော်မုန့် ၁ ခုခု” ကပ်လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါလေ…။ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်း(၁)ရက်တာကိစ္စများအောင် မြင်၍ …
1.April.2021 မှ 7.April.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးများ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ မိမိ၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေ သော ဖြစ်ရပ်များ ကြုံတွေ့နေရတတ် ပါသည်။ ယခုကာလများအတွင်း နှုတ်လွန်၊ လက်ပါ၊ ပြောဆိုမိခြင်းမျိုး အထူးရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူလိမ် ခံရခြင်းနှင့် ငွေလိမ်ခံရခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် အထူး …
၈ရက်အတွင်း ငွေဝင်ကြမ်းချင်ရင် ဒီမနက် ကော်ဖီအအေး ၃ခွက်ကပ်လှုပါ
March 30, 2021 March 30, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
၈ရက်အတွင်း ငွေဝင်ကြမ်းချင်ရင် ဒီမနက် ကော်ဖီအအေး ၃ခွက်ကပ်လှုပါ ငွေဝင်ကြမ်းချင်ရင် ကော်ဖီအအေး ၃ခွက်ကပ်လှုပါ ​ဒီယတြာက ၈ရက်အတွင်း ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ။အရမ်းထူးခြားပါတယ်​။မမျှော်လင့်ပဲကို ဝင်လာတက်ပါတယ်။ ​၆.၂.၂၀၂၁ မနက် ၅:၃၀ ကနေ ၁၁:၀၀ အတွင်း မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ် တော်မြတ်ကြီးအား ကြည်ညို သဒ္ဒါများစွာဖြင့် ကော်ဖီအအေး(၃)ခွက်ကပ်လှုပါ ။ရေခဲရှိရင်ရေခဲနဲ့အေး အေးလေးဖျော်ပါ။ ရေခဲမရှိရင် ရေအေးတာလေးနဲ့ဖျော်ပါရပါတယ်​။ကော်ဖီအပူမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကော်ဖီအအေးပါ။ မိမိဖျော်တက်သလိုဖျော်ပြီး …
ဒေါက်တာစောယုနွယ်၏ (29.3.2021 to 4.4.2021) ဟောစတမ်
March 29, 2021 March 29, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
ဒေါက်တာစောယုနွယ်၏ (29.3.2021 to 4.4.2021) ဟောစတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အထက်လူကြီးကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ပညာရေး ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်မည်။ ပျိုရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံကောင်းနေပါလိမ်မည်။ကျန်းမာရေးအနေ ဖြင့် ထိခိုက်ရှနာလောက်လေးပဲဖြစ်တတ်ပါသည်။ တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်ပါသည်။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ရာထူးတက်တတ်သည်။ငွေကြေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရမည်။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်တွင် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် စီးပွားရေးအရောင်းအဝယ်တိုးတက်မှုရှိပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအ ထက်လူကြီးနှင့် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ …
March 1, 2021 March 1, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
တနင်္လါသားသမီးများ တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း တနင်္လာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမိမိဝယ်ချင်နေတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများဝယ် ယူရတတ်သည်စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေလုပ်ငန်းတိုးတတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ ကြုံရမည်အိမ်တွင်းရေး၊ညီအကိုမောင်နှမကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍စကားများပြောဆိုဖြေရှင်းပေးနေရတတ်သည်ရပ်ဝေးနှင့်နိုင်ငံခြားသို့သွားမည့်အစီအစဉ်များပျက်တတ်ပါသည် ဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်အကောင်းအဆိုးများဒွန်တွဲနေရတတ်သဖြင့် မိမိဉာဏ်နှင့်ဝီရိယအပေါ်မှာများစွာမူတည်နေတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ဓါတ်တည်ကြည် ခိုင်မာစွာဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၍ဇွဲရှိရှိဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါမှအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းဘက်တွင်အလွန်များပြားနေရတတ်ပါသည် အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါသည်မရေမရာလုပ်ငန်းများလုပ်နေရ၍ အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါသည်မိသားစုအတွက်စိတ်ပူရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဘက်၏ဆွေမျိုးများရဲ့ရန်ပြုခြင်းကိုခံနေရတတ်ပါသည်ထီထိုးခြင်းကံစမ်းခြင်းများမှ မမျှော်လင့်ဘဲငွေဝင်တတ်ပါသည်အချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်၍စိတ်ညစ်စရာများ နှင့်ကြုံတွေနေရတတ်ပါသည်အချစ်ရေးပြဿနာများမကြာခဏဖြေရှင်းပေးနေရတတ်သည်ကျန်းမာရေးအညံ့အဆိုးသိပ်မတွေ့ရပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးရပ်ဝေးကနေပညာ အသစ်တွေရတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးဂဏန်း၄/၆/၉အထူးဟောစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှ အရာရာဆောင်ရွက်ပါယတြာဆနွင်းမကင်းဘုရားကပ်လှူပေးပါ။ Unicode တနင်္လါသားသမီးများ တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း တနင်္လာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမိမိဝယ်ချင်နေတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများဝယ် ယူရတတ်သည်စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေလုပ်ငန်းတိုးတတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ ကြုံရမည်အိမ်တွင်းရေး၊ညီအကိုမောင်နှမကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍စကားများပြောဆိုဖြေရှင်းပေးနေရတတ်သည်ရပ်ဝေးနှင့်နိုင်ငံခြားသို့သွားမည့်အစီအစဉ်များပျက်တတ်ပါသည် ဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်အကောင်းအဆိုးများဒွန်တွဲနေရတတ်သဖြင့် မိမိဉာဏ်နှင့်ဝီရိယအပေါ်မှာများစွာမူတည်နေတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ဓါတ်တည်ကြည် ခိုင်မာစွာဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၍ဇွဲရှိရှိဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါမှအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းဘက်တွင်အလွန်များပြားနေရတတ်ပါသည် အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါသည်မရေမရာလုပ်ငန်းများလုပ်နေရ၍ အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါသည်မိသားစုအတွက်စိတ်ပူရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဘက်၏ဆွေမျိုးများရဲ့ရန်ပြုခြင်းကိုခံနေရတတ်ပါသည်ထီထိုးခြင်းကံစမ်းခြင်းများမှ မမျှော်လင့်ဘဲငွေဝင်တတ်ပါသည်အချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်၍စိတ်ညစ်စရာများ …
February 24, 2021 February 24, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
၁၅ရက်တာအတွင်း လိုတရယတြာ ၁၅ရက်တာအတွင်း ရရက်သားသမီးများ စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး လူမှု ရေးအခက်အ အခဲများ အဆင်ပြေစေခြင်းငှာ အောက်ပါယတြာကို ဒါနပြုပါရစေ။ မိမိဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တွင် ပန်းကန်ပြားတချပ်ပေါ်တွင် သရက် ရွက် ၂ရွက်တင်ပါ။ သရက်ရွက်ပေါ်တွင် ဆားအနည်းငယ် (ပုံပါ)ပုံပေးပါ။ ထို့နောက် ကော်ဖီပူပူတခွက် ထိုသရက်ရွက်ပေါ် ကော်ဖီခွက်ကိုတင်ပြီး ဘုရားကပ်လှူပါ။ ကပ်လှူစဉ် ” ၁၅ရက်တာအတွင်း မိသားစုတွင်း ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စီးပွာ …
သိသိသာသာဈေးရောင်းလို့ကောင်းစေလိုလျှင် သိသိသာသာဈေးရောင်းလို့ကောင်းစေသောယတြာလုပ်နည်းဈေးဆိုင်များ အရောင်းဝယ်အထူးရွှင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောနည်း ဖန်ခွက်အ ကြည်၁လုံးထဲရေတဝက်ကျော်ခန့်ထည့်ပြီး အနာကင်းသောသံပရာသီးအဝါ ၁လုံးအားယာဖက်လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရှင်သီဝလိဂါထာတော်၁၁ကြိမ်ရွတ်ကာဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါဆိုင် အမြင့်တနေရာလူမြင်နိင်သောသင့်တော်ရာနေရာတွင်ထားပါ မှတ်ချက်သံပရာသီးသည်ရေပေါမပေါဘဲရေအောက်ရောက်ပါက မအောင်မြင်ပါထိုသံပရာသီးအားသစ်ပင်တပင်အောက်ပြစ်ပြီးရေနင့်ခွက်အားအသစ်ပြုစရာမလိုဘဲအခြား သံပရာသီး၁လုံးဖြင့်ရှင်သီဝလိဂါထာ ၁၁ကြိမ်ရွတ်ပြီးထည့်ပါ ရှင်သီဝလိဂါထာတော် (၁)သီဝလိစမဟာနာမံ၊သဗ္ဗလာဘံဘဝိဿတိ။ထေရဿအာနုဘာဝေန၊သဗ္ဗေဟောန္တု ပိယံမမ။ (၂)သီဝလိစမဟာဝီရော၊ယေယေပဿန္တုမံပိယံတေတေပဿန္တုပရမံ၊ဇနပဒါပူဇယန္တု။ (၃)သီဝလိနာမထေရေန၊မမသီသေဌပေတွာန၊ဇမ္ဗူဒီပမန္ဓလေန၊ဇယောမန္တာသုခါဝဟံ။ (၄)သီဝလိစမဟာနာမံ၊ဣန္ဒာဒေဝါသဗြဟ္မကာ။မနုဿပုရိသောဣတ္ထိ၊မဟာလာဘံဘဝိဿတိ။ (၅)သီဝလိစမဟာလာဘံ၊နာနာဒေဟိဝရံဝရံ။ဣဒမ္ပိပူဇာတံဒေတိ၊မဟာသုခံဘဝိဿတိ။ (၆)ဝဏ္ဏံဒန္တံသုခံ ကိတ္တိ၊အနာမယံဘဝေဘဝေ။ဒေဝဓိတာ၊သဗ္ဗကောဓံဝိနဿန္တု။ (၇)သီဝလိစမဟာလာဘံ၊သဗ္ဗလာဘံဘဝိဿတိ။ထေရဿအာနုဘာဝေန၊သဒါဟောတုပိယံမမ။ (၈)သီဝလိစမဟာထေရော၊ယေယေပဿန္တုမံပိယံ။တေတေပဿန္တုမံပိယံ၊ဇနပ္ပဒံပူဇယန္တု (၉)သီဝလိစမဟာထေရောမမသီသေဌပေတွာနမန္တိတေဇဇယောမန္တံ၊အဟံဝန္ဒာမိသဗ္ဗဒါ။ (၁၀)သီဝလိစမဟာထေရော၊ဒေဝမနုဿပူဇိတော၊သောရဟောပစ္စယာဒီနံ၊မဟာလာဘံကရောတုမေ။ ဈေးဆိုင်များအရောင်းဝယ်အထူးရွှင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောနည်းဖန်ခွက်အကြည်၁လုံးထဲရေ တဝက်ကျော်ခန့်ထည့်ပြီးအနာကင်းသောသံပရာသီးအဝါ၁လုံးအားယာဖက်လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာတော်၁၁ကြိမ်ရွတ်ကာဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါဆိုင်အ …
February 14, 2021 February 14, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း တနင်္လာလုပ်ငန်းသစ်များအကြံအစည်သစ်များကို စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများကို ပြန် လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် လူမျိုးကွဲလူမျိုးခြားများအကျိုးပေးမည်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှန်ကန်မည်ကောင်းသော တတ်လမ်းများပေါ်ထွန်းမည် နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများ စကားပြောဆိုမှုများ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများ ပါဝင်ပါတ်သက်ရမည်။ပရဟိတကိစ္စတွေ မှာဦးဆောင်ရတတ်သည်။အလှူမင်္ဂလာပွဲများ၊ ပွဲလမ်း သဘင် ကိစ္စများမိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ကြုံရမည်။စတော့ရှယ်ယာ၊သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူ ပို့ ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တို့ နှင့် အကျို းပေးကောင်းမည်။ အိမ်ခြံမြေကိစ္စအတွက်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုကြောင့် အဆင် ပြေနိုင်ပါ …
ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း
February 13, 2021 February 13, 2021 - by yelin aung - LeaveaComment
ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုယခုကာလအတွင်းအရန်အတိုက်အခံများကို ရင်ဆိုင်ဖယ် ရှားနိုင်မည်။လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာသာနေတတ်ပါတယ်ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ပြတ်တောက်နေသောအဆက်အသွယ်များနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ပျက်ပြယ်သွားသောကတိစာချုပ်များ ပြန်လည်ချုပ်ဆိုနိုင်မည်ရစရာရှိတဲ့အကြွေးတြွေပန်ရလာတတ်ပါတယ်ရပ်ဝေးကိစ္စလူမျိုးကွဲကိစ္စများဆောင်ရွက် အဆင်ပြေမည်နှောင့်နှေးနေသောခရီးကိစ္စများချောမောအဆင်ပြေသွားမည်။မိသားစုတွင်းလုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်း ရမည်အလုပ်ရှိသူတိုးတတ်မီငွေရေးကြေးရေးကံကောင်းမည်။ဒါကြောင့်ထီဝါသနာပါသူများနီးစပ်ရာ ထီဆိုင်မှာထီထိုးလိုက်ပါစပ်တူထိုးချင်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနှင့်ထီစပ်ထိုးသင့်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးမိသားစုအရေး ကိစ္စများတွင်တူ၊တူမ၊သားသမီးကိစ္စများကြောင့် စိတ်သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သော်လည်းနောက်ပိုင်း တွင်အဆင်ပြေနိုင်မည်အချစ်ရေးတွင်ကံကောင်းတတ်သော်လည်းတစ် ခါတစ်ရံ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုကိုနားလည်မှု များဖြင့်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ပညာရေးကိစ္စများတွင်လိင်မတူသူတွေရဲ့အကူအညီတွေရလာတတ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအားကောင်းပြီးတတ်ကြွရွှင်လန်းနေပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးဂဏန်း၁/၂/၈အထူးဟော လူချစ်လူခင်ပေါမည်စန်းအားကောင်းမည်။ယတြာဘုရားရှင်အားကြက်ဥမွှေကြော်နဲ့ဆွမ်းကပ်ပါ။ခရစ်တစ် Unicode ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစတမ်း ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုယခုကာလအတွင်းအရန်အတိုက်အခံများကို ရင်ဆိုင်ဖယ် ရှားနိုင်မည်။လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာသာနေတတ်ပါတယ်ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် …
Total visitors : 559,571
Total page view: 810,094